4A playoffs: Union vs. Tahoma | The Columbian
4A playoffs: Union vs. Tahoma
Union running back Braedon Ensley leaps over the end zone for a touchdown during a 4A playoff game against Tahoma at McKenzie Stadium in Vancouver on Friday, November 3, 2017. Union beat Tahoma 41-14. (Samuel Wilson/for The Columbian) 1 of 15
Union running back Braedon Ensley squeezes out of a Tahoma triple team during a punt return at McKenzie Stadium in Vancouver on Friday, November 3, 2017. Union beat Tahoma 41-14. (Samuel Wilson/for The Columbian) 2 of 15
Union quarterback Lincoln Victor takes a snap during a 4A playoff game against Tahoma at McKenzie Stadium in Vancouver on Friday, November 3, 2017. Union beat Tahoma 41-14. (Samuel Wilson/for The Columbian) 3 of 15
Tahoma defensive back Jerrel Chapman can't stop Union receiver Darien Chase at McKenzie Stadium in Vancouver on Friday, Nov. 3, 2017. Union beat Tahoma 41-14. (Samuel Wilson/for The Columbian) 4 of 15
Union head coach Rory Rosenbach tells his offense to go for two points after a touchdown during a 4A playoff game against Tahoma at McKenzie Stadium in Vancouver on Friday, Nov. 3, 2017. Union beat Tahoma 41-14. (Samuel Wilson/for The Columbian) 5 of 15
Union running back Elijah Jones finds a hole during a playoff game against Tahoma at McKenzie Stadium in Vancouver on Friday, Nov. 3, 2017. Union beat Tahoma 41-14. (Samuel Wilson/for The Columbian) 6 of 15
Union receiver Darien Chase has plenty of room to run for a touchdown during a 4A playoff game against Tahoma at McKenzie Stadium in Vancouver on Friday, Nov. 3, 2017. Union beat Tahoma 41-14. (Samuel Wilson/for The Columbian) 7 of 15
A pass intended for Union receiver Braedon Ensley is broken up by Tahoma defensive back Tayvian Williams at McKenzie Stadium in Vancouver on Friday, Nov. 3, 2017. Union beat Tahoma 41-14. (Samuel Wilson/for The Columbian) 8 of 15
Union receiver Braedon Ensley is brought down by Tahoma safety Tayvian Williams at McKenzie Stadium in Vancouver on Friday, Nov. 3, 2017. Union beat Tahoma 41-14. (Samuel Wilson/for The Columbian) 9 of 15
The Union football team takes the field before a 4A playoff game against Tahoma at McKenzie Stadium in Vancouver on Friday, November 3, 2017. Union beat Tahoma 41-14. (Samuel Wilson/for The Columbian) 10 of 15
Union football players Jack Eggleston, left, Maliki Campbell, and Alex Gonzales link arms while watching the coin toss before a 4A playoff game against Tahoma at McKenzie Stadium in Vancouver on Friday, November 3, 2017. Union beat Tahoma 41-14. (Samuel Wilson/for The Columbian) 11 of 15
The Union football team stands for the national anthem before a 4A playoff game against Tahoma at McKenzie Stadium in Vancouver on Friday, Nov. 3, 2017. Union beat Tahoma 41-14. (Samuel Wilson/for The Columbian) 12 of 15
Clay Dale cheers for a Union touchdown while playing in the Union pep band during a 4A playoff game against Tahoma at McKenzie Stadium in Vancouver on Friday, Nov. 3, 2017. Union beat Tahoma 41-14. (Samuel Wilson/for The Columbian) 13 of 15
The Union student section lets off a smoke flare before a 4A playoff game against Tahoma at McKenzie Stadium in Vancouver on Friday, Nov. 3, 2017. Union beat Tahoma 41-14. (Samuel Wilson/for The Columbian) 14 of 15
The Union football team dances in the locker room during halftime of a 4A playoff game against Tahoma at McKenzie Stadium in Vancouver on Friday, November 3, 2017. Union beat Tahoma 41-14. (Samuel Wilson/for The Columbian) 15 of 15